फुर्ति मार्केटिंग यात्रा | Martech Zone
दशकौं पछि कम्पनीहरूलाई उनीहरूको व्यवसाय अनलाइन बढाउन मद्दत गर्दै, हामीले प्रक्रियाहरू सुदृढ गरेका छौं जसले सफलता सुनिश्चित गर्छन्। प्राय: जसो गर्दैनौं, हामी पाउँछौं कि कम्पनीहरूले उनीहरूको डिजिटल मार्केटिंगसँग संघर्ष गरिरहेका छन किनकि उनीहरू आवश्यक कदमहरू चाल्नु भन्दा सीधा कार्यान्वयनमा जान्छन्।
डिजिटल मार्केटिंग रूपान्तरण
मार्केटिंग रूपान्तरण डिजिटल परिवर्तनको पर्यायवाची छ। पोइन्टसोर्सबाट डाटा स्टडीमा - डिजिटल रूपान्तरण कार्यान्वयन गर्दै - मार्केटिंग, आईटी, र अपरेशन्समा decision०० निर्णयकर्ताहरूबाट संकलन गरिएको तथ्या -्कले अन्तमा-प्रयोगकर्ताको दिमागमा सुधारको साथ व्यवसायले गर्ने संघर्षलाई औंल्याउँछ। तिनीहरूले फेला पारे कि कम्पनीहरू:
स्पष्ट रूपमा परिभाषित लक्ष्यहरू र दिशा अभाव - केवल businesses 44% ले भनेका छन् कि उनीहरू आफ्नो संगठनको विकासको लागि यसको दृष्टिकोण प्राप्त गर्न सक्ने क्षमतामा अत्यन्तै विश्वस्त छन् र%% बिलकुल पनि विश्वस्त छैनन्।
क्रस-च्यानल डिजिटल अनुभव एकीकृत गर्न संघर्ष - केवल %१% व्यवसायहरू भन्छन कि तिनीहरूको संगठनले सबै प्लेटफर्महरूमा विशेष प्रयोगकर्ता आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्दछ
विरासत मानसिकता छ कि डिजिटल रूपान्तरण को लागी बाधा पैदा - Of 76% व्यवसायहरु भन्छनन कि तिनीहरुको विभागले तिनीहरुको संगठनमा अन्य विभागहरु संग स्रोत र / वा बजेट को लागी प्रतिस्पर्धा गर्दछ।
पुरानो प्रणालीमा अपरेट गर्नुहोस् जसले डिजिटल अनुभव सुधार गर्ने क्षमतामा बाधा पुर्‍याउँछ - % 84% भन्छन् कि उनीहरूको संगठनसँग फरक लिगेसी प्रणाली छ जसले नयाँ डिजिटल अनुभवहरूको विकासको गतिलाई असर गर्छ
तपाईको डिजिटल मार्केटिंग को रूपान्तरण गर्न को लागी तपाईको संगठन को लागी यी खतराहरु छन्। हामीसँग यस क्षेत्रमा ठूलो रिटेलर छ कि उनीहरूको डिजिटल मार्केटिंगमा सहयोग चाहन्थे। हामीले उनीहरूको लागि नयाँ ईकमर्स प्रणाली लागू गर्न अविश्वसनीय अवसर देख्यौं जुन उनीहरूको बिक्रीको केन्द्रमा एकीकृत थियो। यद्यपि, नेतृत्वले स्वामित्व सूची र बिक्री प्रणाली निर्माण गरेको खर्चमा छक्क पर्यो जुन उनीहरूले वर्षौंमा लाखौं डलर खर्च गरेका थिए। उनीहरूले भने कि बिक्री, इन्भेन्टरी र पूर्ति प्रणालीको नयाँ बिन्दुमा भएको कुनै पनि लगानी छलफलबाट बाहिर छ।
नतीजा अनलाइन र अफलाईन बिक्री बीच कुनै समक्रमण वा एकीकरण हुन सकेन। हामी धेरै सम्भावित बैठकहरू पछि यो सम्भावनाबाट टाढा हिंड्यौं - उनीहरूको प्रणालीको गम्भीर सीमितताहरूको कारण उनीहरूले चाहेको बृद्धि नतिजा प्राप्त गर्न सक्ने कुनै तरिका थिएन। मलाई धेरै सन्देह छ कि यो उनीहरूको स .्घर्षहरूको एक विशाल कारक थियो - र तिनीहरूले अब दिवालियापनको लागि दायर गरेका छन् वर्षौंदेखि तिनीहरूको व्यवसाय गिरावट पछि।
यदि तपाईंको व्यवसाय अनुकूलन र यी चुनौतिहरु लाई पन्छाउन को लागी आशा गर्दछ भने, तपाइँले एक अपनाउनु पर्छ फुर्ति मार्केटिंग प्रक्रिया। यो समाचार होईन, हामी सेयर गर्दै छौं फुर्ति मार्केटिंग विधि केहि बर्ष पछि। तर प्रत्येक बर्ष बढ्दै जाँदा, एक अतुलनीय बजार प्रक्रियाको प्रभावले व्यवसायलाई अधिक र अधिक बिगार्न जारी राख्छ। यो लामो समय हुनेछैन तपाईंको व्यवसाय अप्रासंगिक छ।
प्रमुख प्रदर्शन सूचकहरू जागरूकता, सment्लग्नता, अधिकार, रूपान्तरण, अवधारण, अपसेल, र अनुभव सहित डिजिटल व्यवसायको लागि विस्तार गरिएको छ। हाम्रो भर्खरको इन्फोग्राफिकमा, हामीले यात्रा को चित्रण गरेका छौं जुन हामीले हाम्रा ग्राहकहरूलाई उनीहरूको सफलता सुनिश्चित गर्नका लागि लिन्छौं। हाम्रो फुर्ति मार्केटिंग यात्रा को चरणहरू समावेश:
खोज - कुनै पनि यात्रा सुरु हुनु अघि, तपाईंले यो बुझ्नुपर्दछ कि तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईंको वरिपरि के हुनुहुन्छ, र तपाईं कता जाँदै हुनुहुन्छ। प्रत्येक मार्केटिंग कर्मचारी, भाडामा लिएका परामर्शदाता, वा एजेन्सीले आविष्कार चरणको माध्यमबाट काम गर्नुपर्दछ। यो बिना, तपाइँ कसरी आफ्नो मार्केटिंग सामग्री वितरण गर्ने, कसरी प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई स्थिति दिने, वा कुन स्रोतहरु तपाइँको निपटानमा छन् बुझ्दैनन्।
रणनीति - अब तपाईंसँग मार्केटिंग लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न प्रयोग गर्ने आधारभूत रणनीति विकास गर्ने उपकरणहरू छन्। तपाईंको रणनीतिमा तपाईंको लक्ष्यहरू, च्यानलहरू, मिडिया, अभियानहरू, र तपाईं कसरी आफ्नो सफलताको मापन गर्नुहुन्छ को एक सिंहावलोकन समावेश गर्नुपर्छ। तपाइँ एक वार्षिक मिशन कथन, त्रैमासिक फोकस, र मासिक वा साप्ताहिक डिलिभरीहरू चाहनुहुन्छ। यो फुर्सत कागजात हो जुन समयको साथ परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर तपाईंको संगठनको खरीद-इन छ।
कार्यान्वयन - तपाइँको कम्पनी, तपाइँको बजार स्थिति, र तपाइँका संसाधनहरूको स्पष्ट समझ संग, तपाइँ तपाइँको डिजिटल मार्केटिंग रणनीति को आधार बनाउन को लागी तयार हुनुहुन्छ। तपाईंको डिजिटल उपस्थितिमा तपाईंको आगामी मार्केटिंग रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्न र मापन गर्न सबै उपकरणहरू हुनुपर्दछ।
कार्यान्वयन - अब जब सबै स्थानमा छन्, यो रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने समय हो जुन तपाईंले विकास गर्नु भएको छ र तिनीहरूको समग्र प्रभाव नाप्नुहोस्।
अनुकूलन - याद गर्नुहोस् कूल वर्महोल जुन हामीले इन्फोग्राफिकमा समावेश गर्यौं जुन हाम्रो बढ्दो रणनीति लिन्छ र यसलाई फेरि डिस्कवरीमा ट्रान्सपोर्ट गर्दछ! को कुनै पूरा छैन फुर्ति मार्केटिंग यात्रा। एक पटक तपाईं कार्यान्वयन गर्नुभयो? तपाईंको मार्केटिंग रणनीति, तपाईंले यो परीक्षण गर्न, मापन गर्न, सुधार गर्न, र यसलाई अनुकूलन गर्न आवश्यक पर्दछ तपाईंको समयमा तपाईंको व्यवसायमा यसको अधिकतम प्रभाव बढाउन जारी राख्न।
दिमागमा राख्नुहोस् कि यो समग्र यात्रा हो, कार्यान्वयन गर्न र कार्यान्वयन गर्न रणनीतिक गाइड होईन फुर्ति मार्केटिंग रणनीतिहरु। एक राम्रो विस्तृत संसाधन रूपान्तरण XL को हो फुर्ती मार्केटिंगका लागि स्क्रम कसरी लागू गर्ने.
हामी केवल तपाईको यात्राको कोर चरणहरू र कारकहरू जुन तपाईंले डिजिटल मार्केटिंगको ब्रह्माण्डमा प्रवेश गरिरहनु भएको रूपमा पत्ता लगाउनु पर्ने बिचको सम्बन्ध चित्रण गर्न चाहान्छौं। म आशा गर्दछु कि तपाईंले यस इन्फोग्राफिकको मज्जा लिनुहुनेछ जति नै हामीले गत महिना यसमा काम गरेर आनन्द उठायौं! यो हाम्रो ग्राहक संलग्नताको प्रत्येक को आधार हो।
तपाईंको मार्केटिंग प्रयासहरूको योजना बनाउन र तपाईंको समग्र कर्पोरेट लक्ष्यहरूको साथ प goals्क्तिबद्धता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्न मैले एक मार्केटिंग इनिसिएटिभ वर्कशीट पनि विकास गरेको छु।
मार्केटिंग पहल कार्यपत्र डाउनलोड गर्नुहोस्
पूर्ण संस्करणका लागि क्लिक गर्न नबिर्सनुहोस् यदि तपाईंलाई यसलाई पढ्न समस्या भएको छ!
टैग: फुर्ति मार्केटिंगफुर्ति मार्केटिंग यात्राफुर्ति मार्केटिंग मोडलफुर्ति मार्केटिंग प्रक्रियाअख्तियारजागरूकतारूपान्तरणडिजिटल परिवर्तनखोजमंगनीनिष्पादनअनुभवकार्यान्वयनयात्राविपणन पौराणिक कथाबजार मोडेलमोडेलअनुकूलनप्रक्रियाअवधारणरणनीतिपरिवर्तनupsell